Gamudug oo Markii Ugu Horeysay Sheegtay In 30 Ka Badan Looga Dilay Weerarkii Wisil – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Jul 24, 2021 326 0
Markii ugu horreysay wuxuu maamulka Galmudug si rasmi ah u qirtay in khasaare culus uu kasoo gaaray weerarkii istish-haadiyada lagu daah furay ee 27 juun ka dhacay degaanka Wisil halkaasoo si gaar ah loogu beegsaday xero ciidan.
Axmad Macallim Fiqi oo ah wasiirka Amniga ee maamulka Galmudug ayaa shaaca ka qaaday in weerarkaas looga dilay dhowr iyo 30 askari halka kuwa intaa ka badan looga dhaawacay.
Hadalkan ayaa waxa uu kusoo qoray bartiisa Faceboog xilli uu beeninayay in duqeymaha Mareykanka lagu beegsado shacabka una jawaabayay haweeney kamid ah xildhibaanada Mareykanka oo dalbatay in caddeymo sax ah laga keeno duqeymaha Mareykanka.
“miyaysan ogayn in 27 Juun 2021 dhowr iyo soddon qof ay argagixisadu ku dishay Wisil” ayuu yiri Fiqi isagoo muujiyay culeyska ay kala kulmayaan milatariga Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ee gobolka Mudug.
Inkastoo dhacdadii weeneyd ee Wisil ay ka dambeeyeen weeraro dhowr ah oo lagu jabiyay ciidanka Galmudug haddana waxaa aad loo xasuustaa in Fiqi uu horey u beeniyay khasaarihii baaxadda lahaa ee kasoo gaaray weerarkii Wisil.
Qaar kamid ah dadka ka aragtida dhiibtay hadalkan kasoo baxay Wasiirka Amniga Galmudug ayaa sheegay inaan hadda kadib lagu kalsoonaan karin warkiisa maadaama uu marna leeyahay waxba nama gaarin marna uu qirayo in laga dilay tiro ka badan 30.
Dadka qaar ayaa sheegaya in hadalkan is baraanbaraya aanu fadeexad ku ahayn oo kaliya Fiqi balse uu sumcad darro ku yahay warbaahintii warkiisa tabisay iyagoo awooday iney iska hubiyaan.